रौनियारविरुद्ध अख्तियारद्धारा मुद्दा दर्ता | Indrenionline.com
रौनियारविरुद्ध अख्तियारद्धारा मुद्दा दर्ता
काठमाडौं, २० साउन । आठ लाख रुपैयाँ घुससहित पक्राउ परेका बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्रा.डा. राजकुमार (आरके) रौनियारले त्यसअघि एकै व्यक्तिबाट एक करोड २० लाख रुपैयाँ घुस लिएको खुलेको छ ।
जसमध्ये एक करोड दुई लाख रुपैयाँ उनले आफ्ना चालक दिवाकर कार्कीमार्फत लिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ ।
उपकुलपति रौनियार र उनका भतिज प्रतिष्ठानका मेडिकल हाउस अफिसर डा. रामहरि रौनियारविरुद्ध अख्तियारले आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । उनीविरुद्ध १३ वर्षसम्म कैद र एक करोड २८ लाख जरिवाना सजायको दाबी गरिएको छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३ को उपदफा १ ९झ० अनुसार एक करोडभन्दा बढी घुस लिनेलाई आठ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ । त्यस्तै विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी भएकाले सोही ऐनअनुसार उनीविरुद्ध थप तीन वर्ष कैद माग गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले बताए । रामहरिविरुद्ध डेढ वर्षदेखि साढे दुई वर्ष कैद र आठ लाख रुपैयाँ जरिवाना सजाय माग गरिएको छ ।
२० श्रावण २०७६, सोमबार ०७:३८
Previous: आज नाग पञ्चमी
Next: अब सहकारीले १६ प्रतिशतभन्दा बढी व्याज लिन नपाउने
नौ दिनपछि प्रधानमन्त्री ओली डिस्चार्ज
१९ मंसिर २०७६, बिहीबार १७:०१
प्रेस संगठन प्रदेश नम्बर ५ मा ९९ सदस्यीय कमिटी गठन
१९ मंसिर २०७६, बिहीबार १६:५६
कपास उद्योगमा आगलागी हुँदा ६ लाखको क्षति
१९ मंसिर २०७६, बिहीबार १६:००
समाचार संग्रह Select Month December 2019 (26) November 2019 (141) October 2019 (77) September 2019 (143) August 2019 (136) July 2019 (105) June 2019 (86) May 2019 (133) April 2019 (85) March 2019 (171) February 2019 (160) January 2019 (226) December 2018 (225) November 2018 (177) October 2018 (177) September 2018 (233) August 2018 (241) July 2018 (243) June 2018 (245) May 2018 (223) April 2018 (239) March 2018 (429) February 2018 (431) January 2018 (421) December 2017 (377) November 2017 (375) October 2017 (242) September 2017 (226) August 2017 (402) July 2017 (411) June 2017 (421) May 2017 (385) April 2017 (249) March 2017 (434) February 2017 (457) January 2017 (688) December 2016 (769) November 2016 (863) October 2016 (729) September 2016 (1056) August 2016 (1104) July 2016 (989) June 2016 (456) May 2016 (354) April 2016 (234) March 2016 (53)